Belize miganhu yemugungwa ikozvino yakavhurika yekushanya yachting
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Belize Breaking Nhau » Belize miganhu yemugungwa ikozvino yakavhurika yekushanya yachting
Belize Breaking Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Health News • Nhau Dzakanaka • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • Sports • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Mvura yakachena yeBelize uye inofadza yekunaya mamiriro ekunze inopa nzvimbo yakanaka yezororo reyachting uko vashanyi vanogona kunakidzwa nehove, snorkeling, kudhizaivha uye nezvimwe zvinokwezva zvakachengeteka.
Belize inovhurazve zviri pamutemo miganhu yayo yegungwa
Belize Port Authority ine chivimbo chekuti kushanya kwechachting kunogona kuitwa zvakachengeteka
Yachting yekushanya muBelize musika wakasarudzika une mukana wakakura wekuwedzera kukura
Belize yakavhura zviri pamutemo miganhu yayo yegungwa yekushanyirwa kwechachting. Iwo anotenderwa maritime ports ekupinda achave San Pedro, Belize City uye Placencia.
Kuvhurwa kwakagamuchirwa pasi pemamiriro ezvinhu anotevera:
Mvumo yekutumira ine rezinesi inodiwa kuti ngarava ipinde. Vafambisi vekutakura chete vane marezinesi akasarudzika ndivo vanobvumidzwa kubata idzi ngarava dzisiri dzekutengesa uye vanobvumidzwa kubhadharisa mutero usingasvike US $ 150 pabasa ravo.
Cherechedzo yekupinda inofanirwa kuitwa kanokwana maawa makumi manomwe nemaviri asati asvika.
Vashandi vechikepe nevapfuuri vanofanirwa kuratidza humbowo hwezvakaipa Covid-19 test pakapinda. Ose PCR (akatorwa mukati maawa makumi maviri nemaviri ekusvika) uye Rapid Antigen (inotorwa mukati maawa makumi mana nemasere ekusvika) bvunzo dzinogamuchirwa.
Belize Port Authority, iyo inomiririra agency yemiganhu yegungwa yeBelize, ine chivimbo chekuti kushanya kwechachting kunogona kuitwa zvakachengetedzeka nekutevera nhungamiro dzakatenderwa dzemuno nedzekunze pamwe neyakagadziriswa nzira dzekubhodhi nezvibvumirano.
Yachting yekushanya muBelize musika wakasarudzika une mukana wakakura wekuwedzera kukura. COVID-19 yakonzera kuti mhuri zhinji dzifunge nezvekufambisa uye kushanya kwechachting kunotendera mhuri kuenda kuzororo zvakachengeteka mukati me "bubble". Mvura yakachena yeBelize uye inofadza yekunaya mamiriro ekunze inopa nzvimbo yakanaka yezororo reyachting uko vashanyi vanogona kunakidzwa nehove, snorkeling, kudhizaivha uye nezvimwe zvinokwezva zvakachengeteka.